Diyaarado Dagaal Oo Duqeymo aan Khasaara dhalin ka geystay degmada Bu'aale Ee Jubbada dhexe.
Saturday March 23, 2019 - 19:16:08 in Wararka by Super Admin
Diyaarado dagaal ayaa habeenkii xalay duqeyn ka geystay magaalada Bu'aale ee xarunta u ah gobolka Jubbada dhexe.
Xalay abaaro Afartii saac ee habeennimo xilligaas oo dadka intiisa badan ay hudayeen ayay diyaaraduhu beegsadeen goob wax barasho iyo guryo shacab degganaayeen.
Diyaaradaha ayaa madaafiicdii ugu horreysay ku riday iskuul cusub oo dhawaan laga furay magaalada laguna magacaabo Qurdhubah kaas oo lagu barto culuumta sharciga ah balse Alle mahaddi cidna wax kuma noqon maadaama aanan habeenkii la jiifan. Qof ku sugan Bu’aale ayaa noo sheegay in iskuulka ay ka muuqanayaan firiro aan sidaa u badnayn.
Sidoo kale diyaaraduhu waxay duqeeyeen laba guri oo ay dad shacab ah degganaayeen mid kamida guryaha ayaa burburay laakin Alle ayaa ka badbaadiyay reerkii degganaa kuwaas oo isaga cararay ka hor inta aan lasoo duqeyn, halka guriga kale ay wax yeello aan sidaa u badnayn soo gaartay.
Intaas waxaa dheer in ay gantaal ku rideen dad shacab ah oo dhanka beeraha u cararay kuwaas oo ku sasay duqeynta hase ahaatee ma jirto cin wax ku noqotay gantaalkaasi Shariif Shaaric oo kamid ah waxgaradka magaalada ayaa sheegay in duqeyntan loo maleynayo iney geysteen Mareykanka iyo Kenya.
Xaaladda magaalada Bu’aale ayaa saaka deggan waxayna dadku u kala jarmaadeen kasab iyo tacliin mana ahan markii ugu horreysay oo ay duqeyn noocan ah shisheeyuhu u geystaan magaaladan, Dhacdadan ayaa waxay kusoo aadday iyadoo dhawaan hay’adda Amnesty International ay Mareykanka ku eedeysay in uu dad shacab ah ku xasuuqay Soomaaliya.
Dad badan oo markii hore aaminsanaa in dagaalka uu u dhaxeeyo Al-Shabaab iyo shisheeyaha ayaa hadda aaminsan in dalka lagusoo qaaday duullaan ka dhan ah qof walba, waana arrin keeni karta in dad badan ay ku biiraan dagaalyahannada Al-Shabaab, sida ay horey usii sheegeen dad siyaasiyiin ah.
Xigasho: Idaacadda Alfurqaan
Hormuud oo Deeq Raashin ah u qeybisay Qoysas ka barakacay Duqeymo iyo Abaaro (Sawirro).